လုပ်ငန်းခွင်၌ ၂ နှစ်ဆက်တိုက်နှိပ်စက်ခံရတဲ့ ဗီယက်နမ်လူမျိုး နည်းပညာသင်အလုပ်သမား။ ဂျပန်စကားနားမလည်ခြင်းကြောင့်ဆို! - JAPO Japanese News
လုပ်ငန်းခွင်၌ ၂ နှစ်ဆက်တိုက်နှိပ်စက်ခံရတဲ့ ဗီယက်နမ်လူမျိုး နည်းပညာသင်အလုပ်သမား။ ဂျပန်စကားနားမလည်ခြင်းကြောင့်ဆို!
လာ 17 Jan 2022, 12:23 ညနေ
Okayama မြို့အတွင်းရှိ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ်လူမျိုး နည်းပညာသင်အလုပ်သမားတစ်ဦးဟာ၊ အလုပ်ခွင်ရှိ ဂျပန်လူမျိုးတွေဆီကနေ မကြာခဏအနှိပ်စက်ခံနေရကြောင်း တိုင်ချက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ဆောင်းဦးကနေ လက်ရှိ ၂ နှစ်နီးပါး၊ တံမြတ်စည်းနဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အရိုက်ခံရရုံသာမက ဗိုက်ကိုအကန်ခံရခြင်းကြောင့်လည်း နံရိုးကျိုးတာမျိုးအထိတောင်ရှိပါတယ်။
ထိုအမျိုးသားဟာ ကြားခံအဖြစ် မြို့မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမားကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ စကားပြန်နဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့ပေမဲ့ သူ့ကိုရိုက်နက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။
အမျိုးသားကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ Fukuyama မြို့ရဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဟာ ကုမ္ပဏီနဲ့ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့တာဝန်ကို မေးမြန်ထားသလို၊ ကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ တိုကျိုရှိနိုင်ငံခြားသား နည်းပညာအလုပ်သင်အဖွဲ့အစည်းထံ တိုင်ကြားထားပြီး၊ ထိုအဖွဲ့အစည်းက ဆက်လျှက်စုံစမ်းမှုများလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
“ လူတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံမခံရဘူး။ နေ့တိုင်း “ ဒီနေ့ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့၊ အေးအေးဆေးဆေး တစ်ရက်တာပြီးဆုံးပါရစေ” လို့ဆုတောင်းရင်း အလုပ်သွားရတယ်”
၂၀၂၁ ခုနှစ် ၁၁ လပိုင်း၊ Fukuyama မြို့မှာ အသက် ၄၁ နှစ်ထိုအမျိုးသားဟာ စကားပြန်ကနေတစ်ဆင့် အင်တာဗျူးဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်ကိုရောက်လာချိန်က ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၁၀ လပိုင်းမှာဖြစ်ပြီး၊ Okayama မြို့ရှိ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့စည်းရဲ့ ချိတ်ဆက်မှုနဲ့ ငြမ်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်းကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်။ ထိုဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်သမားက ၁၀ ဦးရှိပါတယ်။ ဂျပန်စကားနားမလည်တဲ့အတွက် အလုပ်ညွှန်ကြားမှုတွေကို သဘောမပေါက်ရာကနေ စိတ်မရှည်တော့ဘဲ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီက ရိုက်နက်ခံရလာပါတော့တယ်။
ထိုအမျိုးသားပြောချက်အရ၊ ခေါင်းခေါက်ရာကနေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပိုဆိုးလာတယ်။ မောင်းနေတဲ့ကားထဲမှာ ဂျပန်လို “ 分かりました” ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရွတ်ခိုင်းပြီး အသံတိုးလို့ဆိုပြီး ပုခုံးနဲ့ လက်မောင်းကို ထိုးတယ်။ ကားထဲမှာ ခြေထောက်ကို ဆိတ်တယ်၊ ကန်တယ်၊ ရုံးခန်းထဲမှာ ၂ ယောက်ကြားထဲ ပြေးလို့မရအောင် ညှပ်ထားပြီး၊ ဗိုက်နဲ့တင်ပဆုံကို ကန်တယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ၉ လပိုင်းမှာတော့၊ ထရပ်ကားပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတုန်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၂ ယောက်ထံကနေ တံမြတ်စည်း၊ တုတ်ဖြင့် ခေါင်းနဲ့တင်ပါးကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အရိုက်ခံရတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာ safety shoes နဲ့ ရင်ဘက်ကိုအကန်ခံရတဲ့အချိန်၊ ဆေးခန်းတောင်ရောက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ နံရိုးကျိုးကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။
ထိုအမျိုးသားဟာ ဗီယက်နမ်မှာ စက်ရုံလုပ်သားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့၊ လစာနည်းတာကြောင့် ဇနီးနဲ့ ၅ နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုထားခဲ့ပြီး ဂျပန်ကိုလာခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ကနေ ပို့ပေးတဲ့အေဂျင်စီကို ယန်းသောင်း ၁၀၀ ပေးဖို့အတွက် ငွေချေးခဲ့ရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကနေထွက်ပြေးမယ်ဆို ပိုက်ဆံလည်းပြန်ရမှာမဟုတ်သလို၊ မိသားစုဆီလည်း ပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်မှာတရားစွဲရင် ပြန်ပြီးလက်စားချေခံရမှာကိုလည်းကြောက်ရတယ်။ “ သည်းခံရုံကလွဲပြီး မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး” လို့ပြောပြပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ၆ လပိုင်း၊ စိတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီး ကြားခံအဖွဲ့အစည်းမှာ စကားပြန်လုပ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ်လူမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ Facebook မှာအပြန်အလှန်စကားပြောခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းအရ ကြားခံအဖွဲ့အစည်းရှိ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ကုမ္ပဏီနဲ့စကားပြောကြည့်ပြီး၊ ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်း ဂျပန်လူမျိုးအလုပ်သမားတွေကို ပြန်သတိပေးလိုက်မယ်လို့သာ ပြောလိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလည်း နှိပ်စက်မှုတွေဟာ ရပ်မသွားခဲ့ပါဘူး။
အမျိုးသားဟာ ၁၀ လပိုင်း၊ Facebook မှာရင်းနှီးခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်လူမျိုးကနေတစ်ဆင့် နည်းပညာသင်အလုပ်သမားကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ Fukuyama မြို့ရှိ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း “ Fukuyama Union Tanpopo” နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ထိုအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းထံ အကာကွယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
ရိုက်နက်ခံရမှုအချို့ကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နည်းပညာသင်အလုပ်သမားက ရိုက်ထားမိပါတယ်။ ထိုဗီဒီယိုအတိုင်း၊ ထိုအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဟာ “ နည်းပညာသင်အလုပ်သမားကို ကာကွယ်ပေးခြင်းမရှိ” လို့ဆိုပြီး၊ ကုမ္ပဏီနဲ့ ကုမ္ပဏီကိုစစ်ဆေးတဲ့ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းထံ တောင်းပန်မှုနဲ့ လျော်ကြေးငွေကို တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဒီပြဿနာရဲ့ ဇာတ်မြစ်ကိုလိုက်ကြည့်ရင် ဂျပန်စကားနားမလည်တာကြောင့်လို့ထင်ရပေမဲ့၊ ဒါဟာ အဓိကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။
ဂျပန်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့် သနားညှာတာမှုကင်းမဲ့တဲ့လူတွေ များလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုလူတွေဟာ မိမိထက် အားနည်းတဲ့လူကို လှောင်ပြောင်မယ်၊ အနိုင်ကျင့်မယ် ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ မိမိရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ကို ရှာကြံကြပါတယ်။
ဂျပန်မှာ Suicide လုပ်သူများတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း ဒါကြောင့်ပါပဲ။
အဆိုးဆုံးလူတွေပါ။ ဒါဟာ ဂျပန်တစ်ခုတည်းမှမဟုတ် နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ ရှိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သတိထားရမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံက အလုပ်အကိုင် ！
သွားစရာနေရာမရှိတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည်လျှောက်လွှာတင်သူ။ ဂျပန်ဟာသူတို့ကို ကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား?
Zairyu card အပါအဝင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတုများ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ
ဂါဝရပြု ဦးညွှန့်ပုံ ဦးညွှန့်နည်းများ !!!
အရိုးခေါင်းနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ ဂျပန် Skull Bonsai
2020 ရဲ့ April Fool ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းခဲ့ကြလဲ ?
ဂျပန်ငွေစက္ကူအသစ်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ် ၃ ဦးနဲ့ သူတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်
အလုပ်လာလုပ်မည့်သူများနဲ့ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် immigration လျော့ချပြီး !!!!